आफ्नो हातले पेट नृत्य लागि एक पोशाक सिर्जना
लगभग हरेक आधुनिक महिला सबैका लागि एक शौक खोज्दै छ। embroider खुसी कसैले कसैलाई केक bakes, र कसैले एक नृत्य गर्न जान्छ। यस लेखमा म आफ्नो हातले पेट नृत्य लागि सुट कसरी बनाउन प्राच्य संस्कृति, मास्टर गर्ने महिला, बताउन चाहन्छु।
को सुट विवरण निर्णय गर्न पहिलो कुरा। यो पक्कै पनि एउटा लामो स्कर्ट र bodice हुनेछ। तथापि, तपाईं सुन्दर सबै विवरण बनाउन सक्छ भने, तपाईं सजिलै एक्लै बेल्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं एक पर्दा तयार गर्न सक्छन् सामान को पनि हात, कान, खुट्टा मा विभिन्न सजावट को धेरै आवश्यक - झुमके चेन, कंगन, आदि ...
एक महिला आफ्नो हातले पेट नृत्य लागि सुट गर्न गइरहेको छ भने, काम bodice को तयारी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यो सादा अपारदर्शी ब्रा (प्राथमिकताको फोम) आउन सक्छ। उहाँले भने, र यति सही रंग, यो मात्र सजाउनु गर्न आवश्यक हुनेछ। तथापि, राम्रो अझै पनि उहाँले तुच्छ थिएन फारम गर्न चाहेको कपडा पूर्व-sheathe। सारा छाला विवरण सिर्जना गर्न असम्भव हुनेछ, त्यसैले यो धेरै भागहरु समावेश हुनेछ। पहिलो - यो कप वस्तु। त्यो एक आयताकार आकृति कटौती र समाप्त उत्पादन बाङ्गो छ। के यो डार्ट सिर्जना सिद्धान्त मा ऊतक केही Folds बनाउन आवश्यक छ। पनि पट्टियाँ मा कपडा आवश्यक छ। यो गर्न, बस सबै पक्षलाई यी भागहरु र्याप एक लामो आयत कटौती। यस ब्रा मा पहिले नै सिलना टुक्रा, तिनीहरूले पनि सजावटी सिलाई सी गर्न सक्नुहुन्छ। "पुच्छर" पछिल्लो सिलना छन् कप लागि bodice भागहरु अन्तर्गत लुकाउने छन्। हामी आफ्नो हातले पेट नृत्य लागि सुट मा व्यक्तिगत भागहरु सिर्जना गर्ने, थप जानुहोस्। यस ब्रा पूर्ण नयाँ कपडा र्याप गर्दा, तपाईं आवश्यक सजाय उत्पादनहरु सुरु गर्न। त्यहाँ पहिले नै हामी एक महिला मन एक उपयोगी सबै छ। यो केवल एक सुन्दर कढाई सूत्रहरू वा मोती हुन सक्छ, र चमक माछा तराजू को रूप मा चिपके गर्न सकिन्छ, र यति मा। डी त्यहाँ एक महिला त्यो एक परिणाम प्राप्त गर्न चाहन्छ कि निर्णय पहिले नै छ। तर, हामी सबै गर्न यो सुट मा नृत्य गर्न किनभने, तपाईं सक्रिय सार्न छ, एकदम सुरक्षित संलग्न हुनुपर्छ भन्ने सम्झना गर्नुपर्छ।
पेट नृत्य लागि सिलाई वेशभूषा बनाउन शामिल लामो स्कर्ट। यसो गर्न, तपाईं एकदम पातलो लिनु आवश्यक पारदर्शी ऊतक, ठूलो ढांकना छ यस्ता शिफन वा क्रेप-शिफन रूपमा। अब तपाईं कसरी स्कर्ट बनाउन चाहनुहुन्छ निर्णय गर्न आवश्यक छ। हामी दुई विकल्प विचार गर्न सक्छौं। पहिलो - को पक्ष मा slits संग सामान्य लाइन स्कर्ट, र दोस्रो - एक स्कर्ट-सूर्य।
कुनै पनि मामला मा, तपाईं पहिलो तयार हुनुपर्छ नमुना सुट पेट नृत्य लागि। त्यसैले, सीधा स्कर्ट को femur को अन्त बारेमा गर्न पक्ष गर्न stapled गरिने, कपडा दुई टुक्रा लिनु आवश्यक हुनेछ। Uncrosslinked अंश र तल बस दायर। किनभने यसले नितम्ब, छैन कमर मा सबै भन्दा अधिक संभावना हुनेछ शीर्ष, लोचदार कपडा बनाइने गर्न पारंपरिक व्यापक बेल्ट प्रदान गर्न सकिन्छ। तपाईं बेल्ट नै रूपमा व्यापक दुई पटक कपडा टुक्रा आवश्यक हुनेछ। भित्र को चौडाई को गलत पक्षमा कपडा बेल्ट झुकेको। यसबाहेक, बेल्ट को स्कर्ट गर्न सिलना छ। यो लागि, बेल्ट को पहिलो भित्री भाग, सिलना छ (जो शरीर आसन्न छ) एक स्कर्ट संग त भत्ता कपडा, inwardly tucked बेल्ट र सबै prometyvaetsya को सामने भाग द्वारा कवर छन्। कुरा बेल्ट अगाडि सफासँग बाहिर काम भने सजावटी सिलाई embarking छ। पूर्वीय वेशभूषा पेट नृत्य लागि स्कर्ट सूर्य सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता पनि सम्बन्धित छन्। सिलाई तर, धेरै बढी कपडा लिन लगभग 2.5 पटक, अघिल्लो एक जस्तै हुन सक्छ। स्कर्ट-सूर्य पछि केन्द्र मा कमर एक कटौती संग एउटा चक्र छ। को स्कर्ट माथि, को कमर लाइन, यो सम्भव छ भेला छ। सिले तल हेम संकीर्ण, एक विस्तृत बेल्ट को शीर्षमा सिलना। कि स्कर्ट तयार छ, यसलाई छ।
आफ्नै हातले पेट नृत्य लागि सुट तयार, यो बेल्ट को डिजाइन यस्ता एक क्षण बारे भूल छैन महत्त्वपूर्ण छ। यो विस्तार पोशाक विशेष आकर्षण बनाउँछ छ। कसरी यसलाई के गर्ने? यसलाई पूर्ण आकार मा पूर्व-तयारी ढाँचा राम्रो छ। आफ्नो रुचि को कुनै पनि - शीर्ष हुन एक प्रत्यक्ष र तल बेल्ट त्रिकोणात्मक आकारको, राउन्ड हुन सक्छ निश्चित छ। गणना लम्बाइ: यो कमर परिधि प्लस clasp मा लगभग4सेमी छ। तपाईं आंकडा मा उत्पादन उत्कृष्ट गाउँ एक डार्ट बनाउन सक्छ।
पनि चुनिएको कपडा: बेल्ट को आधार मा - यस्तो supplex, साटन, क्रेप साटन कुरा प्रकाश र सुन्दर, - तंग, तपाईं ताली गर्न सक्नुहुन्छ, र माथि। पनि उत्पादन को सामने भित्र माउन्ट हुनेछ, बाक्लो ऊन आकार बदल्ने उत्पादनहरु आवश्यक छ। वस्तुहरू तयार छन्, तिनीहरू भित्र जोडेको गर्न बाहिर, सी, बायाँ प्वाल मार्फत बारी, झाडू र बकसुआ सम्मिलित (बेल्ट बस fastened गर्न सकिन्छ) आवश्यक छ। अब हामी यो bodice जस्तै तरिका सजाउनु छ।
अन्य के विवरण पेट नृत्य लागि प्राच्य वेशभूषा मान गर्न सक्नुहुन्छ? निस्सन्देह, यो विशेष आभूषण। आवश्यक झुमके, आवश्यक पाखुरामा कंगन र गोलीगाँठो - अधिक, राम्रो, किनभने एक महिला नाच्छन् जब तिनीहरूले राम्रो घन्टी हो। तिनीहरूले गर्न सक्छन्, प्रसंगवश पनि आफ्नै मोती वा मोती बनाउन। छल्ले - घाँटी चेन वा structurally अस्थिर मोती र औंलाहरु सजाने। तर, यो आंकडा पनि बोझिल थियो भनेर, सजावट संग यो ज्यादा छैन महत्त्वपूर्ण छ। निस्सन्देह, हामी विशेष गरी जहाँ आँखा विनियोजन गर्नुपर्छ, उज्ज्वल बनाउन-अप बारेमा भूल हुँदैन।
उपहार amulets। आफ्नो हातले क्रिसमस स्वर्गदूतहरू
बुनाई उपकरण "enterlak"। बुनाई प्रविधी "enterlak": व्यावहारिक सल्लाह
धेरै छोटो कपाल महिला। फेसनदार महिला haircuts (फोटो)
त्यहाँ मानिसहरूको घृणा छ किन, र यो लडाइँ कसरी
सहिजन: लाभ र हानि बिरुवाहरु
धुनमा सूप। व्यञ्जनहरु सूप।
तिनीहरूले कसरी पुस्तिका लाभ उठाउनुभएको छ कि?
के वस्तुहरू तपाईं डिजाइनर मा लिनु आवश्यक - प्रविष्ट गर्न तयार
कहाँ र कहिले स्पेन मा कोर्टेस थिए? यो अवधि अर्थ के हो?